The Gardener: Mother's Day Poems
အမေ ... အမေ ...
အမေ ... အမေ ....
အမေ ... အမေ ... အမေ ... အမေ .အမေ .....
အမေ ... အမေ ... အမေ ... ။
၅၂၈ ချစ်မေတ္တာလို့ပြောကြပါတယ် ....။
အမေတွေကသားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်ကို အဲဒီလိုပြောကြပါတယ် ...။ အမှန်က မေတ္တာပို့တဲ့ အခါ လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၂ ပါးကို မေတ္တာ ၄ မျိုးနဲ့ အရပ် ၁၀ မျက်နှာပို့လိုက်လို့ ... 12x4x10+မရည်စူးပဲပို့တဲ့ ၄၈ ပါး အားလုံးပေါင်းတဲ့ ၅၂၈ ကြီးနဲ့ အမေတွေက သားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ....။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် မိဘမေတ္တာနဲ့ မေတ္တာပို့နဲ့မေတ္တာ တူသလိုလိုနဲ့မတူတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် ....။ သေချာတာက အမေတွေဟာ
ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုချစ်တာထက် အမြဲပိုချစ်နေတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာပါပဲ ....။ ... အမေ့အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးထားပါတယ် .... ခေါင်းစဉ်က ကံဆိုးသူများဖြစ်ပါတယ် .....။ အပေါ်မှာ လုပ်ထားတာကတော့ အသံမထွက်တဲ့ ကဗျာမို့လို့ စိတ်နဲ့ရွတ်တဲ့ကဗျာလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ် ...။ အမေကို ချစ်တယ်လို့ပြောဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ မေ့လျော့နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်တွေဟာ ဆွံ့အနေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်နေတယ် ....။ အမေ ငါချစ်တာ သိမှာပါ ဆိုတဲ့ ပေါတောတော ဆင်ခြေတွေနဲ့ ... အမေတွေကို မေ့ထားလိုက်တာများနေပါပြီ .....။ အသံတိတ်ကားတွေကြည့်လို့မကောင်းသလို အသံတိတ် ချစ်ခြင်းတွေဟာလည်း ကြည့်မကောင်းပါဘူး ....။ အသက်ကြီးလာကြတဲ့အမေတွေအတွက် ... သားသမီးရဲ့ချစ်ခြင်းဟာ ... အားဆေးတစ်ခွက်ထက်ပိုပြီး အားရှိသွားစေနိုင်ပါတယ် .....။ မလိုအပ်ဘဲ အမေ့ကို ချစ်တာကို ထုတ်မပြောကြတဲ့ သားသမီးတွေကို ၅၂၈ ခါ ... စိတ်ထဲကနေ အမေလို့ခေါ်ကြည့်တဲ့အခါ ...စိတ်တစ်ခုလုံးနွေးထွေးလုံခြုံလာသလို ခံစားရနိုင်တဲ့အကြောင်း ....သတိပေးတဲ့ Performance ကဗျာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ....။ ကံဆိုးသူများကဗျာကတော့ အသံထွက်ရွတ်တဲ့ ကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် .....။ အမေ့ကို သတိရနေတဲ့ လူတိုင်း အတွက်ပါ .....။
တစ်ချိန်က ချီပိုးခဲ့ …
တစ်ချိန်က … ပွေ့ ဖက်ခဲ့ …
တစ်ချိန်က … ချော့သိပ်ခဲ့ ….
လောကဓံကြိုးဝိုင်းထဲ လဲသွားတိုင်း ….
အမေ့အပြုံးတွေနဲ့ နံပါတ်စဉ်ရေတွက်ခဲ့တယ် …။
မျက်လုံးထဲမှာ အမေရှိတယ် ….။
စိတ်ထဲမှာ အမေရှိတယ် ….။
နှလုံးခုန်ချက်တိုင်းမှာ အမေရှိတယ် ……။
နွေးထွေးမှုတိုင်းအတွက်ပါ အမေ …
သား ကန်တော့လိုက်ပါတယ် ………….။ ။
ဒီပို့စ်အတွက်တော့ အခမဲ့မတင်နိုင်ပါဘူး .....။ အမေများနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အခွန်ကောက်ပါမယ် ....။
ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်အမေကို သင်ချစ်ခင်ကြောင်း ပြောပါ ......
အဲဒီကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်အခဟာ ကျွန်တော်တို့ အမေတွေအတွက် .... အကောင်းဆုံးအားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ သိပ်ကိုသေချာတာပေါ့ ....။
အခွန်မပေးတဲ့ (အမေကို ချစ်ကြောင်းမပြောတဲ့)သူတွေဟာ ၀မ်းလေးရက်သွားပြီး တစ်ရှူးမရှိတဲ့အိမ်သာနဲ့တိုးသွားတယ်လို့သိရပါတယ် ...။ အခွန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ အမေကို ချစ်ကြောင်းပြောတဲ့သူတွေကတော့ စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့ လခတိုး အလုပ်သစ်ပြောင်း ... မယ်ရွေးပွဲမှာ ဒိုင်လုပ်ရသတဲ့ ...။
Juz recite the sentence... "Mom, I love you so much ..., Thanks for everything ...".
This is the 100% guaranteed charm for asking pocket money from your mom or showing your love and regards to her ....